Mpanamboatra sy mpamatsy kitapo fanaterana sakafo - Factory China Bag delivery food
Kitapom-batsy fanaterana sakafo voatahiry tsy misy rano mafana ho an'ny trano fisakafoanana
Ity kitapo fitaterana sakafo ity dia entana iray malaza be. Ny fitaovana ivelany dia vita amin'ny Tarpaulin izay mateza be. Ny insulation avo lenta dia manamafy ny fitaovana ary manatsara ny fanaporofoana Alu foil liner an'ny kitapo malefaka mangatsiatsiaka miara-miasa mba hitazomana zava-pisotro / sakafo mangatsiaka na mafana mandritra ny ora maro sy ny fanoherana. Ny taratra taratra dia mety hipika ao anaty haizina izay azo antoka ho an'ny mpitatitra. Ny kitapom-batsy mangatsiaka kokoa dia manana mpampisaraka anatiny izay azo atao efitrano roa samy hafa ary entina amina ...
Fanaterana ara-tsakafo hafanana polyester ary kitapo fivarotana enta-mavesatra ho an'ny trano fisakafoanana, mpamily fitaterana, Uber
Ity kitapo fitaterana sakafo ity dia entana be mpitia. Ny fitaovana ivelany dia polyster 1680D izay mateza be. Ny paosy sisiny hitondra kojakoja, finday, karatra fandraharahana, tapakila famandrihana, kahie, sns. Ny foil aluminium sy ny sakafo misy foam foam dia mafana na milay, azo fehezina ny tadiny. Ity vokatra ity dia misy pirinty miaraka amin'ny volavolanao, sary, sary famantarana na soratrao! Tongasoa eto amintsika handefasana ny fanadihadiana! Maimaimpoana ny santionan'ny tahiry! Item No .: PDB2005 Size: 34 * 25 * 38cm Famaritana: Kitapo fandefasana sakafo P ...
kitapo fisakafoanana kitapom-batsy mangatsiaka kokoa miaraka amin'ny fomban-drazana
Ity kitapo fitaterana sakafo ity dia entana be mpitia. Ny fitaovana ivelany dia Tarpaulin izay mateza be. Ny taratra azo taratra dia mety hiposaka ao anaty haizina, ny kitapom-batsy dia manana mpampisaraka anatiny izay azo atao efitrano roa samy hafa ary entina amin'ny fomba samihafa. Ny any ivelany koa dia mahatohitra rano ka mamela ny fandefasana amin'ny toetry ny toetrandro toy ny orana, ny oram-baratra na ny lanezy. Rehefa tsy ampiasaina dia potehina ny kitapo ho an'ny fitehirizana manangona habaka ao an-dakozia. Ity vokatra ...
ambongadiny hafanana mitaingina casserole piknik miaraka amina sary miavaka
Ireo mpitatitra casserole piknikô lehibe dia tonga lafatra ampiasaina ho kitapo fivarotana enta-mavesatra, ho an'ny dia lavitra hividianana kaontera ary ho an'ny fampiasana isan'andro raha lavitra ny trano. Ny totes sy kitapo mangatsiaka mora madio dia vokatra mpanjifa vita tsara izay ho tsara tarehy amin'ny anaran'ny fikambanananao, ity vokatra ity dia misy pirinty miaraka amin'ny volavolanao, sary, sary famantarana na soratrao! Tongasoa eto amintsika handefasana ny fanadihadiana! Maimaimpoana ny santionan'ny tahiry! Item No.
Kitapo fanaterana mangatsiatsiaka misakafo an-tsaha miaraka amin'ny tadin-tsoroka
Ity kitapo fitaterana sakafo ity dia entana be mpitia. Ny fitaovana ivelany dia 1680D miaraka amin'ny PVC mifono izay mateza be. Ny taratra azo taratra dia mety hiposaka ao anaty haizina, ny kitapom-batsy dia manana mpampisaraka anatiny izay azo atao efitrano roa samy hafa ary entina amin'ny fomba samihafa. Ny kitapon-tsakafo fanaterana sakafo dia natao matihanina hanaterana ny fahafinaretana rehefa mandeha na mitondra moto / bisikileta. Ny firakotra aluminium foil coating izay mitazona ny sakafo ho lava kokoa. Ev ...
Fanaterana sakafo voaroaka mafana ho an'ny trano fisakafoanana, mpamily fitaterana, Uber
Ity kitapo fitaterana sakafo ity dia entana be mpitia. Ny fitaovana ivelany dia ny Mesh izay mateza be. Ny foza aliminiôma sy ny sakafo misy foam foam dia mafana na milay, azo zakaina ny fehy. Ity vokatra ity dia misy pirinty miaraka amin'ny volavolanao, sary, sary famantarana na soratrao! Tongasoa eto amintsika handefasana ny fanadihadiana! Maimaimpoana ny santionan'ny tahiry! Item No .: PDB2006 Size: 44 * 30 * 31cm Famaritana: Kitapo fanaterana sakafo antsipirian'ny vokatra: Mesh / Aluminium foil lining. Ny fitaovana dia handalo fitsapana REACH sy Ca 65. Ny lamba manarona dia ho sakafo c ...
Fitaovana avo lenta 1680D mitaingina kitapo fisakafoanana mangatsiaka miaraka amin'ny pirinty
Ity kitapo fitaterana sakafo ity dia entana iray malaza be. Ny kitapom-batsy mangatsiaka kokoa dia vita amin'ny polyester 1680D mavesatra, fanamafisam-peo matevina avo lenta ary fanamafisana ny fanamafisam-peo vita amin'ny foil liner an'ny kitapo marevaka marevaka miaraka amin'ny fitazonana zava-pisotro / sakafo mangatsiaka na mafana mandritra ny ora maro sy fanoherana. Ny rindrina anatiny dia vita amin'ny fitaovana fanatsarana tena tsara ary mora diovina. Ny cooler an'ny kitapo tsy misy rano dia vita amin'ny lamba matevina mavesatra be izay tsy ho rovitra, rovitra na horakoraka fa koa maivana ...